China 55 HRC Square End mill-2 abenzi beFlute nabathengisi | Mingtaishun
Indawo yokugaya ye-tungsten carbide yenye yeendidi ezininzi zezixhobo zokugaya ezisetyenziswa ngokubanzi. Indawo yokuphela yeTungsten carbide yahlukile kwezinye iindidi kuba zinamazinyo okusika kwelinye icala nakwicala. Amatye okusila e-Tungsten carbide nawo anenye okanye nangaphezulu "imitshingo," ethetha imijelo yehelical enzulu ehla isenyuka kumsiki.
Sisebenzisa i-100% yempahla ekrwada, i-carbide powder encinci kunye ne-cobalt powder (evela eJamani) ukwenza intonga ye-carbide, ubunzima bokuba yi-92.5-94.0 (HRA), kunye ne-TRS yi-4200-4800 (N / mm2), oku Intonga ye-carbide inokuqinisekisa ukuba okusila kungagungqi ngamandla kunye nefuthe lamandla.
Impahla yokuqala eluhlaza eluhlaza, ubunzima obuphezulu kunye neTRS
Ubungakanani bengqolowa: 0.2-0.6μm,
Ubunzima: 92.5-94.0 HRA,
I-TRS: 4200-4800 N / mm2,
Ubuninzi: 14.3-14.8 G / cm3
2, Sifumene i-250T Extruder, i-10MPa yoxinzelelo lweSintering Furnace-Vacuum
I-Dewaxing, ezi zixhobo zimbini zibaluleke kakhulu ekwenziweni nakwimithi ephezulu ye-carbide.
3, Sisebenzisa eyethu intonga khabhayithi iipesenti ezingama-90 zokucheba izixhobo.
I-4, Siye sazisa oomatshini bokugaya abaphambili be-CNC ekusebenzeni, i-Rollomatic, iSchneeberger yaseSwitzerland, i-ANCA yase-Australia, iZoller yaseJamani, KEYENCE yaseJapan, eyamisela (iJapan FANUC, iziko lokulungisa umzalwana) itekhnoloji yovavanyo lweteknoloji. Isiqinisekiso sokuchaneka okuphezulu kunye nokusebenza kakuhle.
Ngomoya "wekhredithi kuqala, uphuhliso ngokwenziwa kwezinto, intsebenziswano enyanisekileyo kunye nokukhula ngokudibeneyo", inkampani yethu izama ukwenza ikamva eliqaqambileyo kunye nawe, ukuze ube liqonga elibaluleke kakhulu ekuthumeleni iimveliso zethu e-China!
Sijongene nokhuphiswano olunobuzaza lweemarike zehlabathi, sisungule iqhinga lokwakha uphawu kwaye sihlaziya umoya "wenkonzo ejolise ebantwini nethembekileyo", ngenjongo yokufumana ukwamkelwa kwilizwe liphela kunye nophuhliso oluzinzileyo.
Okulandelayo: HRC55 Ubude obude bokuphela kwesikwere